केके कर्माचार्य - कान्तिपुर समाचार
केके कर्माचार्यका लेखहरु :
चीनतिर फर्किरहेका अरनिको
चीन र नेपालको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन हाम्रो इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण घटना भए । भृकुटीको विवाहपछि महत्त्वपूर्ण घटना मानिन्छ– कलाकार अरनिकोको चीनगमन । दुई देशको सम्बन्ध युगयुगान्तरसम्म मजबुत हुन उनको चीनगमनले ठूलो महत्त्व राख्छ ।
आज पुस २७ पृथ्वीजयन्ती । पृथ्वीनारायण शाह भन्नासाथ दिमागमा आउने पहिलो चित्र हो, औंला ठड्याइरहेको राजाको । उनका सालिक हुन् वा फोटो, सबैमा रोबदार तरिकाले उभिएका, औंला ठड्याइरहेको यो चित्र बन्यो कसरी ? ठडिएको औंलाको अर्थ के हो ? हुलाक टिकटका लागि यो चित्र डिजाइन गर्ने कलाकार केके कर्माचार्यको स्मृति :